Hafatry ny CWM / Albinisma – FJKM
HAFATRA HO AN’NY MPIKAMBANA AO AMIN’NY CWM
FILAZANA MOMBA NY HERISETRA MAMOAFADY
ATAO AMIN’NY OLONA MITONDRA NY ARETINA ALBINISMA
Ny mpandray anjara tamin’ny Fihaonambe Iraisam-pirenenan’ny Council for World Mission (CWM) izay notanterahana tao Blantyre, Malawi, tamin’ny 19 ka hatramin’ny 21 Febroary 2019 dia tena sahiran-tsaina lalina raha naheno momba ireo fombafomba famonoana ny olona mitondra ny aretina « albinisme »(olon-pizza), mifototra amin’ny finoanoam-poana hoe mitondra harena sy vintana tsara ireo olon-pizza ireo. Araka ny fanazavana tao Malawi dia nahitana fiakarana be loatra ireny famonoana mahatsiravina ireny hatramin’ny taona 2014, ary mampiaiky fa zava-manahirana manerana ny Faritra iasan’ny SADEC aty amin’ny Afovoan-tanin’i Afrika izany toe-javatra izany.
Manamafy am-pinoana izahay fa ny olombelona tsirairay dia nohariana araka ny endrik’Andriamanitra ary noho izany dia manana fahamasinana sy fahamendrehana. Ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona, toko 10, andininy 10, i Jesoa dia manoritsoritra ny asa nanirahana Azy mba hitondra ny fiainana amin’ny zavaboary rehetra amin’ny fahafenoany tanteraka. Ny fanaovana lasibatra sy fanimbazimbana vondron’olona iray dia fandavana ny maha-olona azy sy ny fanaovana tsinontsinona ny olombelona rehetra. Tena Mandroba ny fiananantsika tanteraka izany. Noho izany, manameloka amin’ny fomba hentitra indrindra isika ny famonoana ny olona izay mitondra ny aretina albinisma ary tohina amin’ny finoanoam-poana izay mitarika ho amin’ny famonoana.
• Maneho ny hatezerana sy ny alahelo izahay fa mbola mitohy ny habibiana manoloana azy ireo ary mbola tsy voavaha ny ankamaroan’ny olana hatramin’ny nitaterana azy tany Malawi tamin’ny taona 2014.
• Manentana ny governemantan’i Malawi izahay mba handray fepetra haingana sy hentitra hiantohana sy hiarovana ny olona mitondra ny aretina albinisma sy ny fianakaviany, hanafoana ny herisetra atao amin’ny PWA, ary hitondra ny tompon’andraikitra amin’ireo heloka ireo amin’ny fitsarana. Mampahafantatra ity raharaha ity amin’ny mpitondra fanjakana manerana ny Faritra miara-miasa amin’ny SADEC isika fa mety hihitatra hahatratra ny faritra hafa izy ity. Miangavy ireo governemanta ireo isika mba hiaro ny PWA fa izy ireo dia olom-pirenena manana zo hilamina sy ho afaka hampihatra ny zony amin’ny fiainana sy ny fahamendrehana amin’ny maha-zanak’Andriamanitra azy.
• Mandrisika ny Fiangonana ao Malawi ary manerana ny Faritra miara-miasa izahay SADEC hanohy hampiasa ireo sehatra sy loharanom-baovao hanamafisana ny fahamasinan’ny aina sy hanamafisany ny fanamelohana an’ireny habibiana ireny, manohana ny vondrom-piarahamonina amin’ny ezaka ataon’izy ireo amin’ny fiarovana ny PWA sy ny mponina rehetra, ary hiantso ny governemanta any aminy ny sampan-draharaham-piarovana hamaly haingana sy hamarana ny krizy.
• Miantso ny vondrom-piarahamonina rehetra hiara-hiasa ho fiarovana sy fitandremana ireo PWA ireo eny amin’ny misy azy. Mankasitraka ny hetsika miavaka nataon’ ireo vondrom-piarahamonina sasantsasany izay nanavotra ny albinista tamin’ny fakàna an-keriny sy ny fahafatesana sasany tamin’ny alàlan’ny fitandremana sy fahasahiana ary ny fanahy mendrika (Ubuntu).
• Manentana ireo mpilaza vaovao sy mpanao gazety tsy miankina mba hanaparitaka ny fisian’izao krizy izao, ary mampirisika azy ireo mba hanohy ny fampahalalana ny be sy ny maro ny zava-misy mba hahazoany antoka fa ny aina very rehetra na ny tandindonin-doza dia voaisa sy misy dikany.
PWA : Persons with albinism (olona mitondra ny aretina albinisma)
Counsil for World Mission LTD
114 Lavender Street, # 12-01 CT Hub 2, Singapore 338729